အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဖြစ်ပင့်ကူ | ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အခမဲ့အရောင်စာမျက်နှာများ
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဖြစ်ပင့်ကူ - အကျိုးကျေးဇူးများ
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်ပင့်ကူအဘို့အရွေးချယ်သောသူတို့က, သငျသညျက cuddly ကစားစရာမဟုတျကွောငျးကိုသိရပေမည်။ အဆိုပါပင့်ကူတစ်ခါတစ်ရံလက်ပေါ်သတ်မှတ်ထားခံရပေမယ့်အများအားဖြင့်တိရစ္ဆာန်တို့သည် terrarium အတွက်ဘေးလွတ်သောချိုးပိုမိုနှစ်သက်နိုင်ပါ။
အဆိုပါ terrarium အတွက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားတုန်းပါပဲ, ဒါကြောင့်ချည်ငင်စိတ်ဖိစီးမှုအတွက်ပျော်နှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုက်နိုင်ပါတယ်။ ပင့်ကူကျင်းပသည်အဘယ်မှာရှိအဆိုပါ terrarium, 30 40 ×ရပါမည်စင်တီမီတာ၏ဧရိယာ။ အမြင့်စင်တီမီတာ 50 မှတက်တိုင်းတာသင့်ပါတယ်။ molting စဉ်အတွင်းတိရစ္ဆာန်ကျွေးမွေးခြင်းကိုမသငျ့သညျ။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အင်းဆက်ပိုးမွှားများနှင့်လူနေမှု arachnid ကနေပင့်ကူအစာအဟာရလည်းမရှိ, ကျိုင်းကောင်များကဲ့သို့ဥပမာ, စတိုးဆိုင်များတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အမြဲလုံလောက်သောရေရှိသင့်ပါတယ်။ ပင့်ကူ၏သဘောထားအတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်များအပူစိုစွတ်ဖို့နဲ့တစ်ဦးအခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်ဟောင်စေခြင်းငှါမလိုအပ်ပါဘူး။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဖြစ်ပင့်ကူ၏လူကြိုက်အများဆုံးမျိုးစိတ်အနီရောင်ချီလီတာရန်တူလာကောင်များနှင့်Rotfußvogelspinneနှင့်မက္ကဆီကန် Rotknie တာရန်တူလာကောင်ဖြစ်ကြ၏။ ယခင်ငါးခြောက်လမှစင်တီမီတာရှည်သည်နှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာနှင့်တာရှည်ခံသည်။ အနီရောင်ချီလီတာရန်တူလာကောင်အလွန်နှေးကွေးစွာကြီးထွားလာခြင်းနှင့်အစားအစာနှင့်အတူအချိန်ကြာမြင့်စွာဆိုင်းငံ့မှု။ ကြိုက်သောအစားအသောက်ဤအိမျကိုပင့်ကူအင်းဆက်ပိုးမွှားများနှင့်လောလောလတ်လတ်မွေးဖွားကြွက်ဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးသူRotfußspinneအပင်တစ်ပင်တာရန်တူလာကောင်နှစ်သမီးအရွယ် 15 အထိဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအပင့်ကူ၏နှစ်သက်အစားအစာကျိုင်းကောင်သို့မဟုတ်ပိုးဟပ်ဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်မက္ကဆီကန် Rotknie တာရန်တူလာကောင်တစ်ဦးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်အလွန်ရေပန်းစားသည်နှင့် Erstspinne အဖြစ်စတင်များအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်။ ကပုရစ်သို့မဟုတ်ကျိုင်းကောင်နှင့်အတူရှိစီတန်း။
တစ်ဦးကတာရန်တူလာကောင်အမျိုးအစားနှင့်အရွယ်အစားပေါ် မူတည်. ကုန်ကျနှင့် 200 ယူရိုအထိရိုက်ထည့်ပါ။ အဆိုပါ terrarium တစ်ဆယ်ငါးဆယ်ယူရိုအကြားအရွယ်အစားပေါ် မူတည်. အဆိုပါပင့်ကူကုန်ကျစရိတ်များအတွက်လိုအပ်သည်။ daszu မြေပြင်, 15 လီတာအခေါက် mulch, အစားအစာတိရိစ္ဆာန်များနေထိုင်နေလာကြ၏။
လူအတော်များများဟာပင့်ကူကိုစက်ဆုတ်စိတ်ပျက်မိကြောင်းနှင့်သင့်လျော်သော arachnophobia ရှိနေကြသည်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်ပင့်ကူသူမည်သူမဆို da "ပတ်ပတ်လည်ပြေး" ပင့်ကူအားလြော့ဖို့အိမ်ကလာသောအရာအလည်အပတ်ခရီး, မျှော်လင့်ထားရပါမည်။ တစ်ဦးတည်းဟူသောစကားလုံးကိုပင့်ကူအစွန်းရောက်အဆင်မပြေခြင်းနှင့်ထိတ်လန့်များစွာသောလူအတွက်အစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလှည့်ပတ်တွားကြောင်းတိတ်တဆိတ်တွားအမွေး "critters" ဤမျှလောက်များစွာသော hackles ထကြကုန်အံ့။ ဤအကြောင်းကြောင့်, တဦးတည်းသင်တစ်ဦးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်ပင့်ကူရှိသည်မဟုတ်အမြဲချက်ချင်းဆီသို့ခရီးစဉ်ဖော်ပြထားခြင်းသငျ့သညျ။